ကျည်ကာကား ၆စီးအခွန်လွတ်ဝယ်ဖို့ကိစ္စ လွှတ်တော်မှာ ဒီနေ့ရှင်းမယ် အပါအဝင် မနက်ခင်းသတင်းများ - ข่าวสด
ကျည်ကာကား ၆စီးအခွန်လွတ်ဝယ်ဖို့ကိစ္စ လွှတ်တော်မှာ ဒ...
ကျည်ကာကား ၆စီးအခွန်လွတ်ဝယ်ဖို့ကိစ္စ လွှတ်တော်မှာ ဒီနေ့ရှင်းမယ် အပါအဝင် မနက်ခင်းသတင်းများ
5 ธ.ค. 2562 - 10:35 น.
ကျည်ကာကား ၆စီးအခွန်လွတ်ဝယ်ဖို့ကိစ္စ လွှတ်တော်မှာ ဒီနေ့ရှင်းမယ်
တိုယိုတာလန်ခရူဇာ ကျည်ကာကား ၆စီးကို ဝယ်ယူရာမှာ အထူးကုန်စည်ခွန်နဲ့ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် တွေကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိဖို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ကို တောင်းထားပါတယ်။
အဲဒီလိုတောင်းခံရတဲ့အကြောင်းအရင်းကိုလည်း ဒီဇင်ဘာ ၅ရက်နေ့ ကျင်းပမယ့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေး ၁၁ရက်မြောက်နေ့မှာ ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းဝင်က လာရောက်ရှင်းလင်းမှာဖြစ် ပါတယ်။
အခုအချိန်ထိတော့ ကျည်ကာကားဝယ်ယူရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက ဘာကြောင့်နဲ့ ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ၊ ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေ အသုံးပြုဖို့ ဆိုတာကိုတော့ အတိအကျ မသိရသေးပါဘူး။
၂၀၁၃ခုနှစ် ပြီးခဲ့တဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သက်တမ်းအတွင်းကလည်း မာစီးတီးအမျိုးအစား ကျည်ကာကား ၅စီး အပါအဝင်အခြား နောက်ဆုံးပေါ်ကားတွေဝယ် ဖို့အတွက် ဦးသိန်းစိန်းအစိုးရက လွှတ်တော်မှာ တင်ပြကာ သုံးစွဲ မယ့်ငွေအတွက် အဆုံးဖြတ်ရယူခဲ့ဖူးပါတယ်။
အဲဒီလိုလွှတ်တော်အဆုံးအဖြတ်ရယူရာမှာတော့ ကျည်ကာကားငါးစီးမှအပ အခြားနောက်ဆုံးပေါ်ကား ၁၂၇စီးကိုသာ ဝယ်ယူဖို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။
အခုဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သက်တမ်းမှာတော့ မာစီးတီးအစား၊ တိုယိုတာ အမျိုးအစား ကျည်ကာကားတွေကို ဝယ်ဖို့နဲ့ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးဖို့ သမ္မတဦးဝင်းမြင့်က ပြန်လည်တင်ပြလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းဝင်က ရှင်းလင်းပြီးရင်တော့ ဆွေးနွေးလိုတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေက အမည်စာရင်းတင်သွင်း နိုင်တယ်လို့ ဒီဇင်ဘာ ၅ရက်မှာ ပြုလုပ်မယ့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစီအစဉ် အရသိရပါတယ်။
အန္တရာယ်ရှိအဆောက်အဦးလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အောင်ဆန်းဘောလုံးကွင်းမှာဘဲ ဘာသာပေါင်းစုံငြိမ်းချမ်းရေးဆုတောင်းပွဲကိုလည်းကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
လစဉ် ကျပ်သိန်း ၂သောင်းနစ်နာနေတဲ့ အောင်ဆန်းကွင်းဆိုင်ခန်းငှားခကိစ္စ မေးခွန်းထုတ်
ရန်ကုန်မြို့လယ်က အန္တရာယ်ရှိ အဆောက်အဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ အောင်ဆန်းအားကစား ကွင်းပတ်လည်မှာ ငှားရမ်းထားတဲ့ ဆိုင်ခန်းငှားခတွေအရ လစဉ်ကျပ်သိန်းပေါင်း ၂သောင်းလောက်နစ်နာ နေတဲ့ ကိစ္စကို ဒီဇင်ဘာ ၄ရက်နေ့က ပြုလုပ်တဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ မွန်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၉)က ဒေါက်တာဇော်လင်းထွဋ် က မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
အောင်ဆန်းကွင်းပတ်လည်မှာငှားရမ်းထားတဲ့ ဆိုင်ခန်းပေါင်း ၃၂၁ခန်းရှိနေပါတယ်။ ဆိုင်ခန်းတခန်းကို တလ ဆိုင်ခန်းငှားခ ကျပ်တစ်သောင်းနှစ်ထောင်ကျော်သာရနေလို့ လစဉ်ကျပ်သိန်းပေါင်း ၂သောင်းလောက်နစ်နာနေရတာလို့ သူကပြောခဲ့ပါတယ်။
အောင်ဆန်းကွင်းပတ်လည်ဆိုင်ခန်းတွေရဲ့ ပြင်ပ ပကတိပေါက်ဈေးအရဆိုရင် တလ ငွေကျပ် ၈သိန်းကနေ သိန်း ၂၀အထိရှိတယ်လို့ ဒေါက်တာဇော်လင်းထွဋ် ကခန့်မှန်းပြောဆိုပါတယ်။ လစဉ်နစ်နာတဲ့ ငွေတွေနဲ့ အောင်ဆန်းအားကစားကွင်းကို ပြန်လည်အဆင့်မြှင့်တင်တဲ့ လုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ဖို့အတွက် မေးခွန်း မေးမြန်းတဲ့ လွှတ်တော်အမတ်က အကြံပြုခဲ့ပါတယ်။
အောင်ဆန်းကွင်း၊ ပဒုမ္မာကွင်း၊ ဆလင်းကွင်းနဲ့ ဗဟန်းဘောလုံးကွင်း အပါအဝင် ဘောလုံးကွင်း ၂၄ကွင်းကို ၂၀၁၀၊ နိုဝင်ဘာလကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကို ၃ နှစ်ကနဦးအခမဲ့နဲ့ စုစုပေါင်း နှစ် ၃၀ အထိ စာချုပ်ချုပ်ဆိုငှားရမ်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၈ စည်ပင်ဥပဒေအရ ပလက်ဖောင်းပေါ် စျေးဆိုင် မတည်ရလို့ ပြဋ္ဌာန်းထား
အဲဒီထဲကမှာ အောင်ဆန်းကွင်းကိုတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ၂၀၁၈ခုနှစ်မှာ ပြန်လွှဲ ပြောင်းယူခဲ့ပြီး အဲဒီပတ်လည်က ဆိုင်ခန်းငှားခတွေကို နဂိုကောက်ယူခဲ့တဲ့ နှုန်းအတိုင်း ဆက်လက် ကောက်ခံခဲ့တာလို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဒုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြလေးစိန်က ဒီဇင်ဘာလ ၄ရက်မှာ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အောင်ဆန်းကွင်း၊ ပဒုမ္မာကွင်း၊ ဆလင်းကွင်းနဲ့ ဗဟန်းဘောလုံးကွင်းက ဆိုင်ခန်းငှားရမ်းခတွေ ခေတ်နဲ့အညီဖြစ်စေဖို့ ရန်ကုန်တိုင်းမြေ အဆောက်အဦး၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတန်ဖိုးစိစစ်ရေးအဖွဲ့ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၃ရက်မှာ စာပေးပို့စိစစ်ခိုင်းထားပြီး အဲဒီအဖွဲ့ကလည်း ၂ ကြိမ်ခန့်ဆွေးနွေးထားကာဆုံးဖြတ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ သူပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အောင်ဆန်းကွင်းကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကိုလည်း ရန်ကုန်တိုင်း ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစား ဒုဝန်ကြီးတို့ တကြိမ်ဆွေးနွေးပြီးပြီး၊ ဒီဇင်ဘာ ဒုတိယအပတ်မှာ ထပ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဥပဒေက ကျူးလွန်သူတွေကို ပစ်မှတ်ထားအရေးယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်
ဝိဂါတွေအပေါ် အနိုင်ကျင့်တဲ့ တရုတ်အစိုးရကို ဒဏ်ခတ်မယ့် ဥပဒေ အမေရိကန် အောက်လွှတ်တော် အတည်ပြု
တရုတ်အစိုးရက ဝိဂါလူမျိုးတွေအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံတာ၊ ညှင်းပမ်းတာ၊ အာဏာရှင် ဆန်တဖက်သတ် အနိုင် ကျင့်တာတွေ အပေါ် တန်ပြန်နိုင်ဖို့ ဥပဒေတရပ်ကို အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်က ဒီဇင်ဘာ ၄ရက်နေ့က အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီဥပဒေက ကျူးလွန်သူတွေကို ပစ်မှတ်ထားအရေးယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်အစိုးရနဲ့ ရှင်ကျန်းကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ကွန်မြူနစ်ပါတီအတွင်းရေးမှူး မစ္စတာချန်တို့အပေါ် အရေးယူနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်ပေမယ့်လည်း အထက်လွှတ်တော်နဲ့ အမေရိကန်သမ္မတတို့ရဲ့ အတည်ပြုချက်တွေတော့ လိုနေပါသေးတယ်။
ဝိဂါကလေးငယ်တွေကို မိသားစုတွေနဲ့ ခွဲထုတ်ဖို့ တရုတ်လုပ်နေတယ် ဆိုတဲ့ အထောက်အထား ဘီဘီစီက ရ
တရုတ်ကတော့ အခုလုပ်ရပ်အပေါ် အလွန်အမင်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုလို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ပါတယ်။
ဝိဂါအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကတော့ အခုလုပ်ရပ်အပေါ် ကြိုဆိုကြပါတယ်။ ဒီဥပဒေကလည်း ဝိဂါတွေ အပေါ် ဖိနှိပ်နေတဲ့ တရုတ်အစိုးရအတွက် သတိပြုစရာသတိစကားဖြစ်တယ်လို့ သူတို့ကဆိုကြ ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ကျည်ကာကား ၆စီးအခွန်လွတ်ဝယ်ဖို့ကိစ္စ လွှတ်တော်မှာ ဒီနေ့ရှင်းမယ် အပါအဝင် မနက်ခင်းသတင်းများ